Zimstat Inoti Mitengo yeZvinhu Yakakwira Muna Chikumi, Mihoro Isina Kwairi Kuenda
Mitengo yezvinhu zvizhinji inonzi neZimstat iri kukwira asi mihoro isina kwairi kuenda.
Boka reZimbabwe National Statistics Agency, Zimstat, rinoti mitengo yezvinhu yakaramba ichikwira mumwedzi uno panguva iyo mihoro yevazhinji isiri kuchinja.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mumwe mushandi wekuZimStat, Amai Tafadzwa Bandama, vati mwedzi uno waChikumi mitengo yezvinhu yakakwira zvichienzaniswa nemitengo yaiveko mumwedzi waChivabvu.
ZimStat inotiwo vachitarisa kukwira kwemitengo uku zvinhu zviri kunyanyokwira zvakanyanya mudunhu reMashonaland Central, uko mitengo mumwedzi waChikumi yakakwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana, kuchitevererwa neHarare uko mitengo yakakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana , kuchizouya Mashonaland East uko mitengo yakakwira nezvikamu zvina kubva muzana. Dunhu reMatebeleland South ndiro risina kunyanyokwira mitengo
Magwaro abudiswa neZimStat anoratidzawo kuti mumwedzi waChivabvu Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawanda zvichienzaniswa nezvainotengesera dzimwe nyika.
Amai Bandama vati nyika yeSouth Africa ndiyo inonyanyodyidzana neZimbabwe zvakanyanya huye pamwedzi uyu Zimbabwe yakatenga zvinhu kuSouth Africa zvinosvika zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana, asi Zimbabwe yakakwanisa kutengesera South Africa zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana.
Imwe nyanzvi mune zvehupfumi vachishanda vakazvimirira, VaMasimba Kuchera, vati vanoona sekuti mutemo weSitatutory Instrument (SI) 127 ndiwo wakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu uku. VaKuchera vatiwo kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika ndiko kunoita kuti zvinhu zvakawanda zvitengwe kubva kunze kwenyika sezvo kutenga muno zvinenge zvichidhuura.
Mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions VaPeter Mutasa, vatiwo vanoshungurudzika zvakanyanya kana mitengo ichiramba ichikwira, mihoro yevashandi isingakwiri.
Magwaro eZimStat anoratidza kuti zvinhu zvirikunyanyotengwa kunze neZimbabwe zvinosanganisira chibage, gorosi, mafotireza, mishonga zvese yevanhu nemhuka, dzimotokari nezvimwewo.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutengeserana, Amai Sekai Nzenza kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.